Imisesane yokuzibandakanya kwabafazi kunye namadoda.
Izithethe zokwenza izindandatho zokuzibandakanya ziyahluka ngokwexesha, indawo, kunye nenkcubeko. Umsesane wokuzibandakanya ngaphambili wawungaqhelekanga, kwaye xa isipho esinjalo sasinikwa, sazahlukile kwindandatho yomtshato.
Amakhonkco okubandakanya abantu basetyhini
Manenekazi, mamela. Uphuphe ngemini yakho ekhethekileyo ukusukela usemncinci kakhulu. Ucinge isinxibo sakho, umsitho, umdaniso wokuqala; zonke iinkcukacha. Kodwa, ngaba uye wema ekucingeni malunga nokuba zingaphi iindlela ezahlukeneyo zokuzibandakanya amakhonkco kubafazi apho?
Usuku lwakho olugqibeleleyo, ngokuqinisekileyo, olubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, iringi yinto oza kuyinxiba yonke imihla yobomi bakho bonke kwaye ifanelekile ukuba ifezeke.
Amakhonkco okubandakanya amadoda
Ukuba abasetyhini banokunxiba amakhonkco okubandakanya ukubhengeza isimo sabo, kutheni bengakwazi amadoda? Ewe, ngokwenene akukho sizathu. Njengoko abantu abatshatayo ngakumbi bekhetha ukuba indoda inxibe ubungqina bemeko yabo nanjengelizwe elamkela lula ubudlelwane babo.
I-rose yegolide, igolide emhlophe, igolide etyheli, iplatinam okanye ipalladium?
Abahlohli bamatye anamhlanje banokufikelela kwindidi ezahlukeneyo zentsimbi ngemibala eyahlukeneyo. Ngelixa iinketho ezinje ngeplatinam kunye ne-palladium ziqala ukuthandwa kakhulu, igolide ihlala lukhetho oluhle. Ukwafunda ngumahluko okhoyo phakathi kwegolide ephuzi i.i rose yegolide vs. amakhonkco egolide amhlophe yindlela entle yokunciphisa iinketho zakho xa uthatha isigqibo sokuba yeyiphi i-iron ukukhetha ubucwebe obufanekisela uthando ebomini bakho.
Iindandatho zokuzibandakanya ezingabizi
Sukuba ungakhathalelwa yinkcitho. Zininzi izinto ezikhoyo onokuzikhetha kwiiringi zokubandakanya ukubiza. Ewe, intsingiselo ye "efikelelekayo" inezinto eziphezulu kakhulu. Kodwa noxa uhlahlo-lwabiwo mali lungahluka, wonke umntu unalo.
Umjikelezo we-solitaire, i-oval, i-emerald, iapile okanye idayimane elisikiweyo iidayimani, ukudityaniswa kwezitayile, imilo kunye nembonakalo akunakulinganiswa.
Nganye yee-C (Ubunzima beCarat, iSika, uMbala, ukuCacisa) ikhatshwa yitshathi yedayimane ebonisa umahluko phakathi kwamabanga. Emva kokufunda ngakumbi, ukuba ufuna ukubona iidayimani buqu, ndwendwela ivenkile yakho yobucwebe. Fumana ukuqonda okungcono kwento oyixabise ngokobuqu kwidayimani.
Iiringi zokuzibandakanya zegitye lolona khetho lufanelekileyo kulowo wahlukileyo, ukujonga kwendabuko kunesitayile kunye nombala. Ngokufana neendandatho ezininzi eziphefumlelweyo ezihonjisiweyo, amakhonkco amatye enziwe ngelitye lexabiso elifanelekileyo, ukusuka kwi-emeraldi kunye neearubhu ukuya kwisafire, ii-morganites, ii-opals ... Ngokwesiqhelo zenziwe ngegugu njengelitye eliphakathi elizungezwe ziidayimani ezincinci okanye amatye angenabala.
Kuyo yonke le minyaka kuye kwakho uninzi lwabaqulunqi bokwakha umsesane, njengoTiffany, Cartier noHarry Winston, ohlobo lwazo luye lwangqinelana nobunewunewu kunye nokugqwesa. Ukuncomela iidayimani ezinqabileyo nezingaqhelekanga kwaye ukunxulumana nabathengi abazizityebi kunye nabadumileyo kuhlala kunika abaqulunqi bomsesane ukubekwa udumo ngakumbi kunye nokuzibandakanya. Kuyaziwa ngokubanzi kwihlabathi lobucwebe ukuba umyili kunye negama lezinto zobucwebe zihlala zibiza kakhulu.
Abaqulunqi bethu bangenza uyilo lwesiko nje ngawe. Ngokhetho oluninzi, uyaqiniseka ukufumana isangqa esifanelekileyo ngalo mzuzu ofanelekileyo.